Miisaamiyadda xisbiyada Alliansen oo maanta la soo bandhigayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miisaamiyadda xisbiyada Alliansen oo maanta la soo bandhigayo
La daabacay måndag 10 november 2014 kl 10.40
Isniintan waxaa miisaaniyadooda lidka ku ah tan xukumadda soo bandhigey xisbiyada Alliansen, taas oo ay u baxiyeen ”Sweden ka xoog badan”. Miisaaniyadda alliansen ayaa meelmari karta haddii xisbiga Sverigedemokraterna ay doortaan in ay codka siiyaan.
Miisaaniyadda Alliansen oo maanta oo siniin ah lagu soo bandhigey shir saxfaaded ayaa waxaa ka marnaa wax cusub maadaa wax ku jira miisaaniyadan horey loo maqley laguna soo bandhigey bayaanadii doorasahda ee xisbiyadan. Miisaaniyadda alliansen ayaa ku qotanta hindiseyaal ku socda iskuulka, shaqada, ganacsi wanaag, hanaanka nolal wanaaga, difaaca iyo bey’adda.
– Guud ahaan dib u habeynteena miisaaniyadeedna waxaa uga banaan ku dhawaad 10 bilyan oo karoon, ayey tiri Anna Kinberg Batra oo ah afhayeenka siyaasadda dhaqaalah ee xisbiga Moderterna, waxeyna carabka ku adkeysey farqiga u dhaxeeya miisaaniyadooda iyo tan xukumadda.
Alliansen sidoo kale waxay ku dhawaaqay in aysan dalban doonin in la kalo qaado hidnisiyaasha ku jira miisaaniyadda xukumadda inkastoo ay fursad u heystaan in ay sidaas sameeyaan.
Shir saxaafadedka alliansen ku soo bandhigay miisaaniyadooda waxaa laga dheeahn karay in ay u dhaleeceysan yahiin miisaaniyadda xukumadda taas ay ku eedeeyeen in ay jabineyso hanaankii siyaasadeed ee Sweden ka dhigay mid dhaqaalaheeda adag yahay iskana tiiryey xaaladaha dhaqaale ee adag ee sannadyadii danbe caalamak soo wajahay.
– Stefan Löfven miisaaniyadiisa waxay dhaawaceysaa shaqada iyo kobaca , miisaaniyadeena waxay adkeyneysaa dhaqaalaha Sweden, ayey tiri Anna Kindberg Batra.
Waxaanse cadey sida xisbityadda Alliansen ku dhaqmi doonan haddii miisaaniyadooda guuleysato oo ay meelmarto. Balse waxaa cad in xisbiyadan ku bahoobay Alliansen in aysan codkooda hoos u dhagi doonin marka baarlamaanka la horkeeno miisaaniyadda xukumadda iyo tan mucaaradka.
– Waxaan ka ballan qaadney codbaxiyaasha in aan u codeyn doono miisaaniyadeena. Taasna waa midda aan halkan ku soo bandhignay masuuliyaddeedana waa qaadaneynaa , ayey tiri Anna Kinberg Batra.
Taas waxay ka micno tahay in xisbiga Sverigedemokraterna gacantiisa ay ku jirto go’aanka ah miisaaniyadda meelmareysa marka saddexda december baarlamaanka Sweden cod u qaado miisaaniyadda dalka lagu dhaqayo.